क्यासिया फिस्टुला: विशेषता र हेरचाह | सबै रूखहरू
La क्यासिया फिस्टुला यो एक धेरै सुन्दर रूख हो, विशेष गरी जब यो फूल मा छ। यसको फूलहरू वसन्तमा हाँगाहरूबाट झुण्डिन्छन्, यो भएको ठाउँमा रंग ल्याउने, र माहुरीहरू सहित विभिन्न परागकण कीराहरूलाई आकर्षित गर्ने। यो एक बिरुवा पनि हो जसले छाँट्ने राम्रोसँग सहन सक्छ, त्यसैले यसलाई सानो बगैंचामा र भाँडोमा पनि उब्जाउन सकिन्छ यदि हामी यसलाई झाडी आकार दिनको लागि प्रत्येक केही वर्षमा यसको हाँगाहरू काट्न इच्छुक छौं।
यद्यपि, इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा, यदि हामी यसलाई साँच्चै सुन्दर देख्न चाहन्छौं भने, यो आफैंमा बढ्न दिनु राम्रो हो, र केवल ती हाँगाहरू हटाउनुहोस् जुन समय बित्दै जान्छ, सुक्छ र मर्छ। तर, को उत्पत्ति के हो क्यासिया फिस्टुला र तपाईलाई राम्रोसँग बाँच्न सक्षम हुन के चाहिन्छ?
1 क्यासिया फिस्टुलाको उत्पत्ति र विशेषताहरू
3 क्यासिया फिस्टुलाको आवश्यकता के हो?
उत्पत्ति र को विशेषताहरु क्यासिया फिस्टुला
छवि – Wikimedia/B00J4JNH9O
हाम्रो नायक यो एक पातलो रूख हो मध्य पूर्व, इजिप्ट, र एशियाको उष्णकटिबंधीय र उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रहरूमा मूल निवासी। थाईहरूको लागि यो उनीहरूको राष्ट्रिय रूख हो। यद्यपि, यसको उत्पत्ति स्थानहरू बाहिर यो उष्णकटिबंधीय अमेरिकाको बगैंचामा फेला पार्न सकिन्छ, विशेष गरी ती क्षेत्रहरूमा जहाँ यो बारम्बार वर्षा हुन्छ। यो दक्षिणी स्पेनको कोस्टा ट्रपिकल जस्ता अन्य ठाउँहरूमा पनि हुर्किन्छ (वा हुर्काउन सकिन्छ) जहाँ फ्रस्टहरू रेकर्ड गरिएको छैन। अन्य क्षेत्रहरूमा, जस्तै भूमध्यसागरमा, यसलाई जाडोको समयमा सुरक्षा चाहिन्छ।
यो एउटा बोट हो and र meters मिटरको बीचमा बढ्छ। यो सबै भन्दा माथि मौसम द्वारा निर्धारण गरिनेछ, किनकि यो यसको लागि अधिक अनुकूल छ, अधिक र राम्रो यो बढ्न सक्छ; यद्यपि, माटोलाई आवश्यक पर्ने पोषक तत्वहरू प्रदान गर्न र यसको जराहरू सामान्य रूपमा विकास गर्न पनि आवश्यक हुनेछ।
पातहरू वैकल्पिक, हरियो र पेटीलेट छन्। र पहेँलो रङ्गका फूलहरूका लागि, तिनीहरू 30 र 80 सेन्टिमिटर लामो झुण्डिएका समूहहरूमा समूहबद्ध हुन्छन्।। यो सुविधाले कसैलाई थाहा दिन्छ क्यासिया फिस्टुला सुनौलो वर्षाको रूपमा, यद्यपि तपाईले यससँग सावधान रहनु पर्छ किनभने त्यहाँ एउटा रूख छ जसले त्यो नाम पनि प्राप्त गर्दछ: Laburnum anagyroides, जुन समशीतोष्ण हावापानीमा मात्र बस्छ। C. फिस्टुलाले प्राप्त गर्ने अन्य नामहरू निम्न हुन्: purgative cassia, leavesen, fistula cane, Indian laburnum र Golden Rain।
र फल एक गाढा खैरो फलफूल हो जुन धेरै लामो हुन सक्छ, 60 सेन्टिमिटर सम्म, जसको भित्र हामीले धेरै अंडाकार र खैरो बीउहरू भेट्टाउनेछौं।
सजावटी: जब यो फूलमा हुन्छ यो एक साँचो आश्चर्य हो, त्यसैले यो बाहिर खडा हुन सक्ने ठाउँहरूमा रोप्न प्रयोग गरिन्छ। साथै, छाया प्रदान गर्दछ।
बोन्साई: यसमा विशेषताहरू छन् जसले यसलाई बोन्साई उत्साहीहरू र विशेषज्ञहरूका लागि धेरै आकर्षक प्रजाति बनाउँछ: यसले राम्रोसँग छाँट्ने प्रतिरोध गर्छ, राम्रो गतिमा बढ्छ, ट्रेमा रोप्दा पनि समस्या बिना फूलहरू... यो माग गरिएको छैन, यद्यपि यो हुनु हुँदैन। चिसो भयो भने बाहिर राख्नुहोस्।
औषधि: पात, फूल र तरकारी प्रयोग गरिन्छ:
पातहरू: पोल्टिसको रूपमा चिलाउने र/वा खरानी डंकबाट दुखाइ कम गर्न।
फूलहरू: कब्जियतको उपचार गर्न सिरप बनाइन्छ।
फलफूलहरू: विशेष गरी, पल्पलाई हल्का श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरू, जस्तै रुघाखोकी, फ्लू र यस्तै जस्ता लक्षणहरू कम गर्न इन्फ्युजनको रूपमा खपत गरिन्छ।
को आवश्यकता के छ क्यासिया फिस्टुला?
छवि - Flickr/B00J4JNH9O
समाप्त गर्न, हामी यस बिरुवालाई राम्रोसँग बढ्नको लागि के आवश्यक छ भन्ने बारे कुरा गर्न जाँदैछौं; तसर्थ, यदि तपाइँ तपाइँको बगैंचामा वा टेरेसमा एउटा चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ कसरी यसको हेरचाह गर्ने थाहा पाउनुहुनेछ:
यो महत्त्वपूर्ण छ कि यो घमाइलो ठाउँमा राखिएको छ; ताकि तपाईं एक सामान्य विकास गर्न सक्नुहुन्छ। जब यसमा प्रकाशको कमी हुन्छ, यसको हाँगाहरू, अर्थात्, तिनीहरू सबैभन्दा शक्तिशाली प्रकाश स्रोत (जसलाई उदाहरणका लागि धातुमा प्रकाशको प्रतिबिम्ब हुन सक्छ) तिर धेरै छिटो बढ्छन्, र त्यसो गर्दा तिनीहरू "पातलो" र कमजोर हुन्छन्।
जब तिनीहरूले बल गुमाउँछन्, तिनीहरू झर्छन्। यो घर भित्र राखिएका बिरुवाहरूमा धेरै हुन्छ; त्यसकारण यो सीधा सूर्यको किरण प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा जतिसक्दो चाँडो क्यासिया राख्नु राम्रो हुन्छ।
यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि यसको जराहरू कस्तो छन्, तपाइँ यस मुद्दाको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन किनकि तिनीहरू आक्रामक छैनन्। तर यदि तपाईं यसलाई जमिनमा रोप्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, हामी यसलाई पर्खालबाट लगभग5मिटर राख्न सिफारिस गर्छौं कम्तिमा ताकि यो सीधा बढ्न सक्छ।
यदि तपाइँ मा हुन जाँदै हुनुहुन्छ jardín, हल्का माटोमा रोप्नु पर्छ, पोषक तत्वहरूले भरिपूर्ण र राम्रो जल निकासीको साथ।
यदि तपाईं भित्र हुन जाँदै हुनुहुन्छ भने maceta, यो एक विश्वव्यापी खेती सब्सट्रेट भर्न आवश्यक छ जुन हल्का र गुणस्तरको पनि हो, जस्तै यो.
किनकि यसले खडेरीलाई प्रतिरोध गर्दैन, गर्मीमा हरेक २ वा ३ दिनमा कम वा बढी पानी हाल्नु पर्छ र वर्षको बाँकी प्रत्येक ५-६ दिनमा। तर यदि, उदाहरणका लागि, तपाईं बारम्बार वर्षा हुने क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ भने, तपाईंले कम पानी पिउनुपर्छ किनभने माटो सुक्न धेरै समय लाग्छ।
तिर्नु उचित हुन्छ क्यासिया फिस्टुला en वसन्त र गर्मी, विशेष गरी यदि तपाईं जाडो चिसो भएको क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ, किनभने यो महत्त्वपूर्ण छ कि यो त्यो मौसममा सकेसम्म बलियो आइपुग्छ ताकि यो जीवित रहन सक्छ। यसलाई जैविक मल वा सार्वभौमिक (बिक्रीको लागि) जस्ता उर्वरहरूसँग उर्वर गर्न सकिन्छ। यहाँ) वा हरियो बिरुवाहरूको लागि (तपाईं यसलाई किन्न सक्नुहुन्छ यहाँ) प्रयोगको लागि निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
छवि - फ्लिकर / ट्याटरहरू ✾
यो वसन्त-गर्मीमा बीउबाट सजिलै गुणा हुन्छ।। यसलाई एक स्ट्रेनरमा राखिन्छ र यसलाई 1 सेकेन्डको लागि उमालेको पानीको गिलासमा र त्यसपछि अर्को गिलासमा कोठाको तापक्रममा 24 घण्टाको लागि पानी राखिन्छ। अर्को दिन तिनीहरू रोपिन्छन्, उदाहरणका लागि, पीट ट्याब्लेटहरूमा वा विशिष्ट माटोको साथ बीउ ट्रेमा (जस्तै। यो एकघमाइलो ठाउँमा राखिएको छ। सबै कुरा राम्ररी जानको लागि, तपाईंले तिनीहरूलाई समय-समयमा फङ्गिसाइड जस्तै उपचार गर्नुपर्छ यो, किनकि कवकले जवान बिरुवाहरूलाई धेरै गम्भीर क्षति पुर्‍याउँछ।
यदि आवश्यक छ भने, यो जाडोको अन्तमा काटिन्छ। तपाईंले सुक्खा हाँगाहरू हटाउनु पर्छ, र धेरै बढेको ती ट्रिम गर्नुपर्छ।
यसले चिसो प्रतिरोध गर्दैन। एक वयस्क र अनुकूल नमूनाले -1ºC सम्मको धेरै कमजोर र समयनिष्ठ फ्रस्टहरू सामना गर्न सक्छ।, तर तापक्रम १० डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि छिट्टै बढ्यो भने मात्र।
तपाईले के सोच्नु भयो क्यासिया फिस्टुला? के तपाईंले उनको बारेमा सुन्नुभयो?
लेखको पूर्ण मार्ग: सबै रूखहरू » फिचस » भारतीय लेबर्नम (क्यासिया फिस्टुला)